पाँच दलका नेताले भने- सरकार पूर्वतयारी नगरी गैर जिम्मेवार देखिएको छ
‘भागेर ज्यान त जोगियो, अब बाँच्ने कसरी?’
चपाई–चपाई खाऔं, मोटोपन घटाऔं
टिप्पणी डा. रामदेव पण्डित
खानाको स्वादमा रमाउने हो भने सकेसम्म बढी समय खानालाई दाँत र जिब्रोका बीचमा राखिनुपर्छ । किनभने जिब्रो मुनिबाट निस्कने ‘लाइपेज’ इन्जाइमले नै बोसोलाई पचाउन भौतिक रसायनिक प्रतिक्रिया शुरू गर्ने हो ।
हास्य–चिकित्सा संज्ञानात्मक (कग्निटिभ) व्यवहार र वैकल्पिक चिकित्सा पनि हो । मानसिक स्वास्थ्यमा अद्भुत लाभ दिने यस चिकित्साले इम्युनिटी पनि बृद्धि गराउँछ । यस चिकित्सामा कुनै खालको औषधि पनि प्रयोग गरिंदैन ।
भाँती पुर्‍याएर पानी पिए धेरै राेगबाट बच्न सकिन्छ
बोतल, आम्खोरा आदिबाट पानी घट्घट् गरी पिउँदा त्यो सीधा आमाशयमा पुग्छ, त्यसमा मुखको पाचन–रस मिसिन पाउँदैन । अतः पानी सधैं गिलासमा राखेर मुख लगाएरै ग्रहण गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
अनिद्राको समस्या छ ? यी हुन् मीठो निद्रा लाग्ने उपाय हिजोआज मानिस एउटै तापक्रममा बस्न खोज्छ तर निद्रा पर्न मस्तिष्क र शरीरको भित्री तापक्रम झण्डै एक डिग्री सेल्सियसले घट्नुपर्छ ।
भोक लाग्यो ? यी हुन् पाँच प्रकारका भोक भोक जैव रसायनिक क्रिया मात्र होइन, बहुआयामिक वेग हो । भोक जगाउन सजिलो हुँदैन र यसलाई पालेर बस्नु पनि हानिकारक हुन्छ । भोकले खाना चिन्छ तर खानेले सही आहार चिन्न सक्नुपर्छ ।
स्वाद तीतो, स्वास्थ्यलाई मीठो छाला चिलाएको, घाउ–खटिरा आएको वेला तीतेकरेलाको पात पिसेर लेप लगाउँदा समस्या हट्छ । त्यसैगरी कब्जियत भएको र पिसाब पोलेको वेलामा करेलाको जुस पिउँदा राहत दिन्छ । यसबाहेक करेलाको जुस पिउँदा खराब कोलेस्ट्रोल घट्छ । तौल नियन्त्रण गर्छ र पेटका चुर्ना र जुकाहरू मार्छ ।
स्वास्थ्यका लागि लाभदायक सातु सातु सामान्यजनको मात्र होइन, मध्यम र उच्चवर्गको प्रिय खाजा बन्दै गएको छ । यसैले सातुलाई लघु भोजन पनि भनिन्छ ।
कसरी गर्ने बन्दाबन्दीमा यौन ऊर्जाको व्यवस्थापन ? बन्दाबन्दीमा अधिक भोजन र व्यायामको अभावमा बेचैनी उत्पन्न हुन्छ र क्षणिक आनन्दका लागि यौनको भोक उत्पन्न हुनसक्छ । तर, याद राखौं हामी जति वीर्य नष्ट गर्छौं, उति नै शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ ।